Industiriiwwan sharafa alaan rakkachaa jiraniifi kallattii furmaataa
Industiriiwwan sharafa alaan rakkachaa jiraniifi kallattii furmaataa Featured
Hanqinni sharafaa ammayyuu fala barbaada
Finfinnee: Industirii Zarufam, Waldaa Dhuunfaa Ittigaafatamummaansaa Murtaa'ee, industiriiwwan maanufaakchariingii omishaa galtee farniichariif ooluu kan omishuudha. Industirichatti omisha 'Doorskinii' dizaayinii gargaraatiin kan oomishu yoo ta'u, dandeettii qabu guutummaan omishuuf dhaabbaticha hanqinni sharafaa alaa mudatullee, gama biraatiin biyya keessatti oomishuu eegaluun sharafa biyyattiin baastu hanbisaa jiraachuu Geggeessaan Hojii Industirichaa Obbo Saamu'eel Zaruu ni ibsu.
Isaanis waltajjii woorkishooppii galma Hoteela Neeksaasitti Kibxata geggeffamerratti akka ibsanitti, dandeettiin oomisha industirichaa ji'atti kuma 33 yoo ta'u, yeroo amma ji'atti kuma 14 qofaa omishaa akka jiru dubbatu. Kunimmoo sababa hanqina sharafa alaatiin hanga barabaadame omishuun akka hindanda'amne himaniiru. Rakkoo kana hambisuudhaafis baankotarraa liqaa argatanillee, ammayyuu omishaa industiricha sadarkaa barbaadamerraan ga'uun akka hindanda'amne ibsaniiru.
Gama mootummaatiin deeggarsi taasifamuuf jiraatullee, hirkattummaa sharafa alaarraa ba'uuf dhaabbatichi omishasaa gara alaatti erguun rakkicha furachuuf carraaqaaa akka jiru himaniiru. Dhaabbannisaaniis hanqinna sharafa alaa mudatuunis meeshaa qophaa'aa galfamaa ture utuu hindhumatin galchuun biyya keessatti akka omishamu taasisuun sharafa alatti ba'u %80 habisaa akka jiran dubbataniiru.
Ministeera Industiriitti Daariktara Ittaanaa Seektara Galtee Konistiraakshinii Obbo Haddushom Xi'uum gamasaaniin akka jedhanitti, ergama inistitiyuutichaaf kennamee keessaa gufuuwwan adda baasuudhaan sirreeffama kennuudha. Akkasaan jedhanitti, industiriiwwan sababa hanqina sharafaatiin gabaarrattii dorgomaa ta'uu akka hindandeenye himaniiru. Kanaaf dandeettii qaban guutummaa akka gargaaramaniifi dorgomtoota ta'anii akka ba'aniif deeggarsii kan taasifamu ta'uu himaniiru. Ammayyuu taanaan meeshaaleen alaa fichisiifamaa akka jiru kan eeran Obbo Haddushoom, hanqinni gabaa waan jiruufi jedhaniiru.
Kana furuudhaaf dhaabbilee omishasaanii gara alatti erguu eegalan mootummaan onnachiiftuuwwan kaa'amaniin deeggarsa kan taasisuudha. Industiriin farniicharii hinbabal'anne waan ta'eef, abboottii qabeenyaa hawachuuf kan hojjetan ta'uullee dubbataniiru. Akka Obbo Haddushomitti, rakkoon hanqina sharafaa rakkoo guutummaa biyyattii ta'uufi baay'inaan galteewwan kan galaa jiran biyya alaatii waan ta'eef, rakkoo kana furuu hanga danda'amettii oomishaalee omishaman %5-10 gara biyya alaatti akka ergan taasisuudha. Sharafa alaa barbaachisuus ofiisaaniin akka bakka buusan gochuudha jedhaniiru. Kana gochuufis paakeejiin onnachiistuu ka'ameetti fayyadamtoota akka ta'an gochuu dubbatan. Kan gochuuf ammoo walitti hidhamiinsa gabaa taasifamaa akka jiru ibsaniiru.
Torban kana/This_Week 12415
Guyyaa mara/All_Days 1821835